ह्याण्ड स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले छालामा कस्तो असर गर्छ? :: स्वास्थ्य खबरपत्रिका
ह्याण्ड स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले छालामा कस्तो असर गर्छ? स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले हुने असरबाट बच्न के गर्ने?
कमला गुरुङ शनिबार, पुस ४, २०७७, १०:२४:००
काठमाडौं - कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न जोगिने प्रभावकारी उपायमध्ये एक हो, ह्याण्ड स्यानिटाइजरको उचित प्रयोग।
ह्याण्ड स्यानिटाइजरको प्रयोगले कोरोना लगायत अन्य विभिन्न भाइरसको संक्रमण हुनबाट जोगाउन सक्ने चिकित्सक बताउँछन्। तर, स्यानिटाइजरको प्रभावकारी प्रयोग भएन वा यसको अत्यधिक प्रयोगले छालामा असर पुग्न सक्छ।
स्यानिटाइजर बनाउन प्रयोग गरिने अल्कोहलको अत्यधिक मात्रा र अन्य रसायनका कारण छालामा असर पुग्ने गरेको छाला रोग विशेषज्ञ डा सबिना भट्टराईले बताइन्।
स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले छालामा के कस्तो असर गर्न पुग्न सक्छ ? यसबाट निम्तिने समस्याबाट बच्न के गर्ने लगायतका विषयमा हामीले छाला रोग विशेषज्ञ डा भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौँ। उनीसँग गरिएको कुराकानी भिडियो मार्फत यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ:
ह्याण्ड स्यानिटाइजरको लगातार प्रयोगले के छालामा असर गर्न सक्छ?
– ह्याण्ड स्यानिटाइजरमा प्रयोग हुने अल्कोहलको मात्राले छालामा हुने असर फरक पर्छ।
– अल्कोहलको मात्रा बढी भएको स्यानिटाइजरले कोरोना भाइरस मार्न प्रभावकारी मानिएपनि छालालाई असर गर्न सक्छ।
– स्यानिटाइजरमा प्रयोग हुने अल्कोहलले छालामा तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असर गर्न सक्छ।
– स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोगले छाला सुख्खा हुने, रातो हुने, फुट्ने, चिरा पर्ने र दुख्ने समस्या हुन्छ।
– अल्कोहल बाहेक स्यानिटाइजरमा प्रयोग गरिने अन्य रसायन पदार्थले पनि एलर्जी हुने र स–साना पानीको फोका आउने हुन सक्छ।
– स्यानिटाइजरको अत्यधिक प्रयोग गर्दै गए समस्याहरु बढ्दै जान्छ।
अत्यधिक स्यानिटाइजरको प्रयोगले दीर्घकालीन समस्याहरु पनि निम्त्याउन सक्छ?
– अत्यधिक स्यानिटाइजरको प्रयोगले छाला सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्याहरु पनि निम्त्याउन सक्छ।
– अल्कोहलको मात्रा धेरै भएको स्यानिटाइजरले छालामा हुने लिपिड लेयरलाई असर गर्छ।
– लिपिड लेयरले छालाको कोषिकाहरुलाई बाँधेर राख्ने काम गर्छ।
– लिपिड लेयरलाई असर गर्दा छालाको कोषिकाहरुलाई बाँधेर राख्ने क्षमतामा ह्रास आउँछ।
– छालाको कोषिकाहरुलाई बाँधेर राख्ने क्षमतामा ह्रास आउँदा विभिन्न भाइरस तथा ब्याक्टेरिया छालाको माध्यमबाट शरीर भित्र पस्छ।
– अत्यधिक स्यानिटाइजरको प्रयोगले छालालाई फाइदा गर्ने ब्याक्टेरियालाई पनि असर गर्छ।
कति प्रतिशत अल्कोहलको मात्रा भएको स्यानिटाइजरले छालामा बढी असर गर्ने हो?
– अल्कोहलको मात्रा जति धेरै हुन्छ, त्यसको असर पनि बढी हुने संभावना हुन्छ।
– स्यानिटाइजरभन्दा सकेसम्म साबुन पानीले हात सफा गर्नु राम्रो हुन्छ।
अत्यधिक स्यानिटाइजरको प्रयोगले हुने असरबाट बच्न के गर्न सकिन्छ?
– स्यानिटाइजरको असरबाट बच्न यसको प्रयोगपछि मोस्चराइजरको प्रयोग गर्ने।
– हातमा लगाएको स्यानिटाइजर पूर्ण रुपमा सुकेपछि मात्र मोस्चराइजर क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ।
– चिल्लो बढी भएको स्यानिटाइजरले छालालाई यी समस्याहरुबाट बचाउन सक्छ।
– प्रत्येक पटकको स्यानिटाइजरको प्रयोगपछि मोस्चराइजर क्रिमको प्रयोग गर्नुपर्छ।
दुई दाँतको बीचमा किन हुन्छ खाली भाग? रोकथाम सम्भव छ? शारीरिक सौन्दर्यता देखाउने विभिन्न पाटोहरू हुन्छन्। मानिसको शारीरिक सुगठन तथा अनुहारको बनोटले शारीरिक सौन्दर्यतामा प्रभाव पार्छ। ४ घण्टा पहिले